थापाको कब्जामा राप्रपा ,लोहनी र राणा निरीह - USNEPALNEWS.COM
थापाको कब्जामा राप्रपा ,लोहनी र राणा निरीह
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापाहरुको कब्जामा जाने भएको छ । कमल थापा र सुनीले थापका सहकार्यले राप्रपा थापाको कब्जामा जाने देखिएको छ । अध्यक्षमा कमल थापा पक्का जस्तै भएका छन् सुनिल थापालाई पहिलो नम्बरो बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने तयारी छ । पशुपति समेशर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी दुई थापाको सहकार्यले शसंकित देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुने भएको छ । अध्यक्षमा दाबी गरिरहेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अन्तिममा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपनि अध्यक्षमा थापा विरुद्ध प्रदीपविक्रम राणाले उम्मेदवारी दिएका छन् । गत बुधबार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निवासमा थापा, लोहनी, पशुपतिशमशेर राणाबीच थापालाई नै सर्वसम्मत अध्यक्ष मान्ने सहमति भएको थियो । तर, भोलिपल्टै लोहनीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए ।
थापाविरुद्ध उम्मेदवारी दिने राणा को हुन् ?
थापाविरुद्ध उम्मेदवारी दिने राणा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का अध्यक्ष हुन् । लोहनी, राणा पक्षका केही नेता–कार्यकर्ताको साथ र सहयोग भने उम्मेदवार राणालाई भएको बुझिएको छ । शनिबारको बन्दसत्रमा अध्यक्ष थापाले आदेश दिएर बन्दसत्रबाटै निकाल्न लगाएपछि प्रतिशोधमा उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएको राप्रपाका एक नेताले बताए ।
राप्रपाले छिटो स्थानीय चुनाव गर्न माग गरेको छ । चुनाव संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको भन्दै यथाशक्य छिटो चुनाव घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिएको प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ६ फागुनमा महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष थापालगायतका शीर्ष नेताले छिटो चुनाव घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चुनाव घोषणाको पहिलो स्वागत राप्रपाले गर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो ।
तीन हजार दुई सय ८६ मतदाता सूची सार्वजनिक गरेको राप्रपामा एक अध्यक्ष र ९८ केन्द्रीय सदस्यका लागि सोमबार दिउँसोबाट मतदान हुनेछ । सोमबार बिहान उम्मेदवारमाथि दाबी–विरोध, उम्मेदवारको नाम फिर्ता, अन्तिम नामावली प्रकाशनको काम गरेर भोटिङ मेसिनमा गोलाप्रथाबाट मिलाउनेजस्ता काम गरिने बताइएको छ । त्यसपछि सोमबार दिउ“सोबाट मतदान सुरु हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सोमबार सकिनुपर्ने महाधिवेशन भने एक दिन लम्बिने भएको छ । केन्द्रीय सदस्यका लागि सेलेब्रिटीहरू कोमल वली, रेखा थापासम्मले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसअघि दुवै राप्रपामा रहेका वरिष्ठ नेताहरूले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
९८ केन्द्रीय सदस्यका लागि तीन सय ६३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि निर्वाचन समितिले गोलाप्रथाबाट उम्मेदवारको सूची टुंग्याएको छ । विद्युतीय मेसिनबाट चुनाव हुने भएकाले नाम पहिले राख्ने भन्ने विवाद नआओस् भनेर गोलाप्रथाबाट सूची तय गरिएको नेता सुरेश आचार्यले जानकारी दिए
आयातमा करहरु बढाइने ट्रम्पको घोषणा
(अपडेट) अनशन स्थलबाटै डा. गोविन्द केसी पक्राउ परे